Ibtilada Reer Puntland haysa waa Laalush
Maxamud Sheekh Xasan Dahir
Siyaad Bare intuu Soomaaliya Xukumayey wuxuu soo saaray Siyaasiyiin badan oo Biiriqaatayaal ah, kuwaas oo uu u adeegsan jiray cabudhinta Macaaradka iyo burburinta Jabhadaha ka soo horjeeday.
Inta ay jirtay Dowladii Siyaad Bare Ninkasta oo Biiriqaata ah si uu Lacag ama Jago Siyaad Bare uga helo, wuxuu ku hadaaqi jiray Erayada ay ka midka yihiin Soomaalinimo, Wadaninimo, Kacaannimo, iyadoo waliba la wada ogaa in aanay meesh waxaas iyo wax u dhow midna oolin iyo in waliba Siyaad Bare Qabiilkiisa oo kalioya dhisayo, Dhaqaalihii iyo Awoodiina faraha u galinayo .
Si kastaba ha ahaatee Erayada Midnimo, Wadaninimo iyo Kacaanimo waxay noqdeen Gabaad uu Ninkasta oo Biiriqaata ahi ku dhuunto, kuna jaasuuso kuna dhabarjabiyo Qabiilkiisa ama uu ku kala qaybiyo Beeshiisa, waxaana ku adkayd Dadka in ay kala gartaan in ay dhab ka tahay waxay Biiriqaatayaashu ku doodayeen in ay yihiin iyo in kale
Sababta loo garan waayey Biiriqaatayasha in kasta oo ay Ninkasta u cadayd in waxaay samaynayaan Wadaninimo iyo Soomaalinomo ku jirin, waxay ahay iyadoo wali Doowlad Dadka ka dhaxaysa iyo Magaaloyin iyo Caasumad Dadka ka dhaxaysa oo ay wada dagan yihiin jireen.
Lakiin Markuu Dagaalkii sokeeye garxay, burburayna wax alaale wixii Dadka ka dhexeeyey, Somaliyana noqotay:Qabiilkastoo naftaa Nabiyoo u madaa, Ninkastana Deegaankiisii Dabada la galay, way ku filaan waayeen Erayadii ahaa Midnomo, Wadaninimo iyo Soomaalinomo in ay Gabaad u noqdaan Biiriqaatayaashii.
Qof wuxuuna rabo Qiil uma waaye e Nimankii Biiriqaatayaasha ahaayeen, iyagoo ka faa�idaysanayaan baahida Heshiis loo qabo, waxay heleen Eray cusub oo ay Gabaad ka dhigtaan oo ha Erayga dib u heshiisiinta soomaaliya.
Eraygaasi wuxuu noqday mid ay Laalushka ku qaataan, Deegaamo daganaa Dab ugaga huriyaa, wuxuuna soo nooleeyey Erayadii hore ee wax lagu cunijiray sida Somaalinimo waa in aynu ku heshiisnaa iyo waa in soomaalinimo ku midoownaa.
Iyadoo waliba la wada ogsoonyahay in wax lagu midoobo iyo wax lagu heshiiyo Meesha ool, maxaa yeelay wali sidii uu Dagaalka Sokeeye ku bilaabmay ee ahayd in Qabiil kasta Awooda Dalka ee Siyaasadeed iyo mida Dhaqaale si gorgortan la�aana faraha ugu dhigo, waxba iskama badalin.
Waxaa kale oo ka faa�iidaysiga Erayga dib u heshiisiin sii adkeeyey waa Dhalashada ay Xarumo awoodeed Cusub dhasheen, kuwaa oo ku dhisan qaab Beeleed sida Hargaysa oo xarunta Qabiilka Isaaq noqotay, Garoowe oo xarunta Puntland ee beesha Daarod noqotay, iyo Moqdisho oo xarunta beesha Hawiyeye noqotay, iyo Baydhabo oo xarunta beesha Digil iyo Mirifle Noqotay, taas oo ka dhigtay waxa la isku haysto wax Xugtaa ka cad.oo aan la isugu soo gaban karin.
Inkasta ay Dhalashada Xarumahaa Arinta ka dhigeen labo Cayrinka ku qaybsadeen Bisaylka iskuma cowrido oo Ninkasta Meeshisii Maamul ka samaystay, iyo iyadoo Maamul midaysan si loo helaal wax yaalo badan in marka hore meel la isla dhigaa u baahantahay, sida Awooda Maamul gobeleedyada, Awooda Madaxwaynaha iyo waliba Awooda Maamulka Dhexe, iyo in marka hore in fikrada fidaraalka ah la hirgaliyo. Loo baahan yahay si aanay tagrifal iyo xadgudub u dhicin, haddana meel dhexe oo la isugu yimaado haddii la raadiyo waa la heli karay.
Waxaana Heshiis kasta oo dhaca loo baahan yahay in Dhinca walba Meeshiisa ka soo durko si uuna Dhinac ugu naaxin soo duruga Dhinaca kale iyo in aan Dhinacna loo suuro galin in uu helo Awood buuxda uu hadhoow ku tirtiro ama wax ku yeelo dhinaca kale.
Iyadoy dib u heshiisiintii sidaa u adagtahay oo ay tahay war sidee Qarannimana loo helaa Xadgudubna la isaga ilaaliyaa, Haddana arintu waxay noqotay Gacantii Laalush u barataa Gumudkaa dhaqdhaqaaqa oo Kooxdii Siyaad Bare soo ibtileeyey oo u badan reer Puntland waa ku filaan waayey Xurumo Beeledkoodii, waxayna hadba u butaacan Xarun beeled kale oo ay Laalush ka soo qaatan kulana gorgortamaan in haddii Laalush la siiyo kooda burburinayaan.
Wuxuuna Sadbursi raadinta Qabaa�ilka qaarkood, sida Qabiilka Cabdiqaasim oo raba in uu Dhulka Digil iyo Mirifle iyo Kismanyo ku sadbursado iyo Qabiilka Isaaq oo rabaan in ay Puntland ku sadbursadaan, u suurto galiyaan biiriqaatayaaasha in ay helaan xarumo diyaar ula ah bixinta Laalushka.
Qabaa�ilka kale ee Soomaaliyeed baad moodaa in aanay ibtilada Laalush qaadashadu sidaas ugu faafin, Waxaana wax lala yaabo noqotay in inkasta oo Biiriqaatayaashu Soomaaliya meelkasta ay joogaan tababar mid ah Siyaad Bare soo siiyey hadana in ay Qabaa�ilka kale ee Soomaaliyeed oo qaarkood haddii xaga Juquraafiga la fiiriyo u sharaxnaan karaan in ay Maamulka Puntland ku biiraan sida Dadka Gaalkacyo dagan iyo kuwo Ciirigaabo dagan ee aanay reer Puntland isir wadaagin, haddana in la waayey wax Siyaasi ah oo Reerahaas ah oo Puntland damac Jago ama mid Lacag u soo doonta, ama Wadaninimo iyo Heshiis jacayl Puntland ugu soo biira.
Xaqiiq waxaa ha in Soomaalinimado, Wadaninimado iyo waliba Dib u Heshiisiin dhinackasta in ay ka yimaadaan loo bahan yahay, u talaabida ay reer Puntland Odayaashoodu iyo Siyaasiyiintoodu u talaabayaan Xarun Awoodeed Beel kale waxay xoojinaysaa Awooda iyo Damaca Beeshaa ay u tageen waxayna burburinaysaa Awooda Puntland iyo beelaha daga, mana keenayso Soomaalinimo iyo Midnimo.
Waxaanad halkaa ka garanaysaa in Ibtilada Puntland haysaa Laalushka yahay, iyo in Odayaasha iyo Siyaasiyiintu iyo waliba Isimadu erayada dib u heshiisiin, Midnimo, iyo Soomaalinimo Gabaad ay Laalush ku qaatan ka dhiganayaan, maxaa yeelay Ninkii Dab daminayaa dib uma afuufo.
Soomaalidu waxay dhahaan Haan guntaa laga tolaa Ninkii dib u heshiisiin rabaa Beeshiisa ama Beel kale Gagaal kama dhex rido, haddiise dib u heshiisiin Dagaal keento waa mid Laalush lagu cumay sida tii Carte.
Heshiis Lacag waa lagu cunikara lakiin dadka laguma qasbikaro in ay qaataan.Heshiiskaa, haddiise la isku dayo in lagu khasbo dagaal baa ka dhalan sida Puntland ku socoto.
Mahmaah baa waxay tiraah Dameerkaaga ceelka waad gaynkartaa in uu biyaha cabose kuma qasbi kartid.